Ciidamada Kenya Iyo Kuwa Uganda Oo La Weeraray. – Bogga Calamada.com
Ciidamada Kenya Iyo Kuwa Uganda Oo La Weeraray.
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin waxey saacadihii lasoo dhaafay weeraro saf ballaaran ah ku qaadeen saldhigyo iyo fariisimo ciidamada Saliibiyiinta Kenya iyo kuwa Uganda ay ka kala sameysteen qeybo ka mid ah gobalada Jubbada hoose iyo Shabeelada hoose.
Dhanka gobalka Shabeelada hoose waxey ciidamada Mujaahidiinta Labo jeer oo xalay ah dagaallo culus ku qaadeen saldhiga ciidamada Saliibiyiinta Uganda ay ka sameysteen Buurta Ateenooyinka ee degmada Baraawe ee gobalkaasi.
Saldhigaasi waxaa ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan,waxeyna warar hoose sheegayaan iney jirto khasaara askarta Uganda lagu gaarsiiyay dagaalkaasi.
Dhanka Gobalka Jubbada hoose waxey ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab dagaal culus ku qaadeen Fariisimaha iyo saldhiga ciidamada Kufaarta Kenya ay ka sameysteen deegaanka Husingow ee gobalkaasi.
Dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in dagaalkaasi uu ka mid ahaa dagaaladii ugu cuslaay ee mudooyinkii dambe ka dhacay deegaankaasi,waxeyna intaasi ku dareen in ciidamada Shabaabul Mujaahidiin gudaha u soo galeen deegaankaasi.
Dagaalka markii uu soo gaba gaboobay ayeey ciidamada Saliibiyiinta Kenya bilaabeen iney Madaafiic ku garaacaan howdka deegaanka taasi oo muujineysa in askarta Kenya khasaara culus oo isugu jirta Naf iyo Maal lagu gaarsiiyay dagaalkaasi.